CNC Wood umzila, Laser Ukumakisha Machine, Metal Cutting Matshini - Apex
Factory Sale Woodworking Cutting mfanekiso 1325 ...
Intengiso Hot Wood Door Ukwenza Machine Atc 3 Axis Wo ...
Panel Controller Axis Single Iimela ezimbini Ivula ...
1390 CO2 Laser engumkroli for Acrylics, Ilaphu, J ...
Jinan Factory yokuthengisa Hot oluzenzekelayo CNC Wood Lathe ...
Jinan Single Axis CNC Wood Ivula Lathe Machin ...
Wood Ivula Single Axis Enye yokuluka Lathe Mach ...
Wood CNC umzila kunye Disc ATC ngokukhawuleza isixhobo ukutshintsha
High Precision Advertising nangokukrola mfanekiso Cu ...
Iron Steel Ubhedu Metal Ikubumbe mgawuli engumkroli 6 ...
INQANABA R & D
Ngokuqhubekayo elidlula kwinqanaba lophando lwetekhnoloji kunye nophuhliso
Ngentando; ingqalelo, ubungcali; uyilo olukrelekrele; imveliso ekrelekrele
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kumzi-mveliso, iimveliso ezichanekileyo eziphezulu, ubukrelekrele obuphezulu, okhuselekileyo nohlala ixesha elide.
Sijonge iiarhente zentengiso kunye namaqabane kwihlabathi liphela
Bonke oomatshini be-CNC kufuneka bapase uhlolo olungqongqo ngaphambi kokuziswa, kunye nokuhanjiswa okuthe ngqo kokuthumela ngaphandle iipakeji, ezifanelekileyo ulwandle, umoya, okanye iindlela zokuhamba ngekhuriya. Iimveliso kufuneka zisebenzise i-CE, i-ISO, isatifikethi se-FDA ukuba abathengi bafuna njalo. Umzi mveliso uhlanganisa malunga neemitha ezingama-3000 ezikwere…
Ukuguqula iinkuni ngeLathe
Ukusikwa kweFiber Laser
Apex unikezelo on-line pre-ukuthengiswa kwenkonzo kunye nasemva-kwentengiso nkonzo phesheya; Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa umatshini, unokuza kwinkampani yethu kwaye siya kukufundisa simahla; Kwaye emva kokuthenga umatshini wethu, ukuba ukulungiswa kuyafuneka, siya kukunceda kwi-intanethi okanye ukuhambisa iinjineli zikunike ubuso ngobuso kwinkonzo kwihlabathi liphela.
Ukuthetha malunga nokuSebenzisa iZakhono ze-cnc router
Xa sisebenzisa i-cnc router router, akunakuphepheka ukuba asizukuhlangana nomsebenzi onengxaki, othatha ixesha kwaye onzima, okhathaza kakhulu. Ngapha koko, xa usebenzisa i-cnc router ukwenza olu hlobo lomsebenzi, kukho izakhono ezithile ezinokulandelwa, kwaye ezi zakhono zinoku ...
Ukuthetha malunga nokukhethwa kwesixhobo se-cnc router
Njengoko sonke sisazi, kwinkqubo yokukrola nge-cnc router, kufuneka sihlale sifaka izixhobo ezahlukeneyo zokukrola ngokwezinto ezahlukeneyo zokukrola. Ke loluphi uhlobo lwesixhobo esisetyenziselwa uhlobo luni lwezixhobo? Ndiyoyika ukuba kusekho abantu abaninzi abangaziyo, ke ...
Iingcebiso zokunciphisa isixhobo ekubalekeni kwe-cnc router
Xa sisebenzisa umzila we-cnc wokhuni kwimveliso yokukrola, ukuba iziko lesixhobo alingqinelani neziko lokujikeleza kwe-spindle ye-cnc router router, iya kubangela ukuba isixhobo esijikelezayo, oko kukuthi, ukujikeleza kwesixhobo hayi ukugxila. Oku kuya kubangela isiphumo sokukrola ...
Iintsilelo eziqhelekileyo zokujija iinkuni cnc umzila
umzila we-cnc wokhuni luhlobo lomatshini osebenza ngamaplanga osetyenziswa rhoqo, kwaye ngamanye amaxesha kufuneka usebenze ngokuqhubekekayo iintsuku ezininzi. Ekuhambeni kwexesha, nokuba ulunge kangakanani umgangatho, ngokuqinisekileyo uya kuba nokusilela okwahlukileyo. Apha ngezantsi siza kwazisa ngeempazamo ezininzi eziqhelekileyo zeenkuni cnc ...